Erayada Ben Bernanke: Weedho, Taariikh Nololeed iyo Waa Maxay Keynesian -ka Cusub | Maaliyadda Dhaqaalaha
Haddii aad raadinayso dhiirigelin, caawimaad ama aad rabto inaad ogaato waxay dhaqaaleyahannada waaweyn ka fikiraan adduunka maaliyadeed, waxaan kugula talinayaa inaad eegto xigashooyinka Ben Bernanke. Waxay ku saabsan tahay siyaasi Mareykan ah iyo dhaqaaleyahan kaasoo Wuxuu ahaa madaxweynaha Kaydka Federaalka ee Mareykanka, agaasimaha Barnaamijka Dhaqaalaha Lacagta ee Xafiiska Qaranka ee Cilmi -baarista Dhaqaalaha iyo tifaftiraha "Dib -u -eegista Dhaqaalaha Mareykanka."
Waxaa laga yaabaa inuusan ka mid ahayn ragga ugu taajirsan adduunka, laakiin waa wuxuu ka mid yahay kontonka dhaqaaleyahan ee ugu daabacan. Tan iyo dhammaan xirfadiisii ​​iyo raadadkii uu ku lahaa adduunka maaliyadda, waxaan soo qaadan doonnaa weedhaha ugu wanaagsan Ben Bernanke oo aan waxyar ka hadalno taariikh nololeedkiisa iyo aragtidiisa dhaqaale.
1 12ka weedhood ee ugu fiican Ben Bernanke
2 Waa kuma Ben Bernanke?
2.1 Dhaqaalaha Cusub ee Keynesian
2.2 Aagga euro iyo hoos u dhaca ganacsiga
12ka weedhood ee ugu fiican Ben Bernanke
Sidii aan hore u soo sheegnay, weedhaha Ben Bernanke waxay noqon karaan kuwo aad u xiiso badan. Tan waxaa u sabab ah xirfadda dheer ee dhaqaaleyahankan siyaasadda iyo suuqyada maaliyadeed labadaba. Ben Bernanke wuxuu dhowr casharro ku saabsan aragtida lacagta iyo siyaasadda ka bixiyey Dugsiga Dhaqaalaha ee London. Intaa waxaa dheer, in uu qoray guud ahaan laba buug. Mid waxay ku saabsan tahay dhaqaalaha dhexe ee macroeconomics. Midda kale waxay ka hadlaysaa microeconomics iyo macroeconomics. Anagoo taas ka garanayna Ben Bernanke, waxaan horeba ugu raaxaysan karnaa laba iyo tobankiisa xigasho ee ugu sarreeya.
“Dhibaatada iyo hoos -u -dhaca dhaqaale waxay keeneen dulsaar aad u hooseeya, waa run. Laakiin dhacdooyinkani waxay sidoo kale burburiyeen shaqooyinkii, waxay joojiyeen koboc dhaqaale, waxayna u horseedeen hoos u dhac weyn qiimaha guryaha iyo meheradaha badan. ”
"Casharka taariikhda ayaa ah inaadan gaarin soo kabasho dhaqaale oo joogto ah inta nidaamka maaliyadeed uu ku jiro dhibaato."
"Waa qiimaha guusha: dadku waxay bilaabaan inay u maleeyaan inaad adigu awood leedahay."
“Dhab ahaantii, guud ahaan, ka soo noqoshada maalgashiyada caafimaadka qaba waxaa laga yaabaa inaysan ku waarin dhaqaalaha daciifka ah. Dabcan way adag tahay in loo keydiyo hawlgabnimada ama yoolalka kale iyada oo aan dakhli laga helin shaqo. ”
Waa hagaag, yididiilo waa wax wanaagsan. Waxay halkaas ka saartaa dadka, bilaaba ganacsi, kharash garayn iyo wax kasta oo ay qaadato si dhaqaaluhu u socdo. ”
Waa hagaag, Mareykanka, dabcan, waa dhaqaalaha ugu weyn adduunka. Waa qiyaastii rubuc wax -soo -saarka adduunka. Waxay kaloo hoy u tahay qaar badan oo ka mid ah hay'adaha maaliyadeed ee ugu waaweyn iyo suuqyada maaliyadeed. "
“Siyaasadda lacagtu wax badan kama qaban karto kobaca muddada dheer. Waxa kaliya ee aan isku dayi karno waa inaan isku dayno inaan hagaajinno xilliyada uu dhaqaaluhu niyadjabsan yahay baahi la'aan awgeed. "
Haddii aad rabto inaad fahanto cilmiga dhulka, waxaad baraneysaa dhulgariirrada. Haddii aad rabto inaad fahanto dhaqaalaha, waxaad baraneysaa Niyad -jab weyn. ”
“Shaqada Kaydka Federaalka waa in la sameeyo wax sax ah, in la qaato danta fog ee dhaqaalaha qalbigeeda, xitaa haddii tani mararka qaar macnaheedu yahay in aan la jeclayn. Laakiin waa inaan sameynaa wax sax ah. ”
“Qalalaasaha ka jira Yurub wuxuu saameeyay dhaqaalaha Mareykanka isaga oo u dhaqmay sidii dhoofinta wax dhoofintayada, isagoo miisaamaya ganacsiga iyo kalsoonida macaamilka, wuxuuna cadaadis saaray suuqyada Mareykanka iyo hay’adaha maaliyadeed.
“Waxaan ahay taageere mowduucyada Diiqada Weyn, si la mid ah sida dadka qaar ay u jecel yihiin mawduucyada Dagaalkii Sokeeye. Arrimaha ay soo bandhigeen Niyad -jabka, iyo casharradiisa, weli waa muhiim maanta. ”
"In kasta oo sicir -bararka hooseeya guud ahaan wanaagsan yahay, sicir -bararka aadka u hooseeya wuxuu halis u keeni karaa dhaqaalaha - gaar ahaan marka dhaqaaluhu dhibaato ku jiro."
Waa kuma Ben Bernanke?
Si aad xoog badan ugu siiso weedhaha Ben Bernanke waa inaad wax yar ka ogaataa taariikh -nololeedkiisa, ogow qofka uu ahaa iyo sida uu uga fikiray adduunka dhaqaalaha. Dhaqaalayahankan asal ahaan ka soo jeeda Yuhuudda wuxuu dhashay December 13, 1953 ee Georgia. Wuxuu ahaa guddoomiyihii kooxda lataliyayaasha dhaqaalaha ee George W. Bush markii uu ahaa madaxweynaha Mareykanka. Sannadkii 2006 wuxuu qabtay jagada madaxweynaha Kaydka Federaalka ee Maraykanka, booska hore u ahaa Alan Greenspan, oo ah qof kale oo muhiim u ah dunida maaliyadda oo weedhihiisu ay yihiin kuwo lagu talin karo.
Heer siyaasadeed, Bernanke waa xubin ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga ee Waqooyiga Ameerika. Marka laga hadlayo waxbarashadiisa, siyaasigan iyo dhaqaale -yahanku wuxuu shahaadada dhaqaalaha ka qaatay Jaamacadda Harvard. Maxaa ka sii badan, waxaa loo magacaabay dhakhtarka dhaqaalaha MIT (Machadka Farsamada Massachusetts). Jaamacadda Princeton wuxuu ahaa guddoomiyaha waaxda dhaqaalaha wuxuuna intii u dhaxaysay 2002 iyo 2005 ka mid ahaa guddiga siyaasadda lacagta ee Bangiga Dhexe ee Mareykanka. Waxaa mahad iska leh dib -u -habayntiisa waxbarasho ee aan fiicnayn ee Ben Bernanke loo soo jeediyay inuu buuxiyo booska Alan Greenspan oo ah guddoomiyaha Kaydka Federaalka ee Maraykanka.
Marka laga hadlayo dhaqaalaha, Ben Bernanke wuxuu muujinayaa dano gaar ah labadaba sababaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee Dhibbirka Weyn. Wuxuu daabacay dhowr maqaal oo joornaal aqoonyahan ah oo ku saabsan mowduucan oo qaar badan oo ka mid ah xigashooyinka Ben Bernanke waxay muujinayaan xiisaha uu u qabo arrintan. Kahor inta uusan Bernanke shaqadiisa qaban, aragtida monetarist -ka ugu weyn inta lagu gudajiray Diiqada Weyn waxay ahayd tii Milton Friedman. Sida laga soo xigtay isaga, waxa sababay xiisaddan ayaa ah inta badan hoos u dhigidda lacag bixinta oo ay fuliso Kaydka Federaalka. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jiray dhowr jeer oo uu faallo ka bixiyay in kor u qaadista dulsaarka goor hore inta lagu guda jiray Diiqaddii Weynayd ay ahayd mid ka mid ah khaladaadkii ugu waaweynaa ee abid la sameeyo. Milton Friedman sidoo kale wuxuu ahaa dhaqaaleyahan muhiim ah oo leh fikrado iyo weedho aad u xiiso badan.
Dhaqaalaha Cusub ee Keynesian
Dhaqaalaha New Keynesian, oo sidoo kale loo yaqaan Keynesianism -ka Cusub, Ben Bernanke waa mid ka mid ah shaqsiyaadka ugu caansan. Laakiin waa maxay kani? Waa iskuul fikirka dhaqaalaha ujeedka laga leeyahay uu yahay in la siiyo aasaaska dhaqaalaha yar-yar waxa loogu yeero dhaqaalaha Keynesian. Keynesian macroeconomics waxay dhaleecayn kala duwan ka heshay kuwa raacsan New Classical Macroeconomics, taas oo Dhaqaalaha Keynesian -ku uu soo baxay jawaab ahaan.
Sida laga soo xigtay dhaqaalayahan David Colander, welwelka ah in labada Keynesianism -ka iyo Macroeconomics -ka New Classical -kuba ay ka qabaan dabacsanaanta sicirka iyo mushaharka gebi ahaanba kuma xirna. Halkii waxay diiradda saareysaa guul -darrooyinkii laga sameeyay isku -duwidda nidaamsan ama hay'adeed, isku -tiirsanaanta qaybaha dhaqaalaha iyo qodobbada, iyo macroexternalities -ka. Habkani wuxuu kaa caawinayaa in la aqoonsado qodobo badan oo ah isu -dheelitirka dhaqaalaha, kaasoo beddelaya dabeecadda doodda ee la xiriirta macroeconomics.
Makiw iyo Romer Macroeconomists waxay la yimaadeen ereyo asal ah si ay u qeexaan Dhaqaalaha Cusub ee Keynesian. Kuwan laba fikradood oo udub dhexaad u ah iskuulkan laga bilaabo maanta waa kuwan soo socda:
Kala -guurka qadiimiga ah lama aqbalo.
Guuldarrada suuqa ayaa lagama maarmaan u ah in la fahmo isbeddellada ka dhici kara.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hal shay oo ay ka siman yihiin classicism -ka cusub. Labada dugsiba waxay u malaynayaan in dabeecadaha shirkadaha iyo qoysaska labaduba ay aad ugu dhow yihiin aragtida rajooyinka caqliga leh ee ay soo jeediyeen Muth iyo Lucas. Si kastaba ha ahaatee, Dhaqaalaha New Keynesian wuxuu difaacayaa in guuldarooyinkii suuqa ay jiraan oo cawaaqibkoodu dhab yahay. Waxaa ka mid ah adaygnimada, dhegdhegta ama aan ku filnayn qiimaha iyo mushaharka. Yacni: Midkoodna kama jawaabo isbaddallada suuqa isla markiiba.
Ku darista dhejiska mushaharka iyo qiimayaasha dhammaan cilladaha kale ee tusaalaha, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa taas dhaqaaluhu ma gaari doono shaqo buuxda. Xagga dhaqaalaha, shaqo buuxda ayaa dhacda marka dhammaan dadka doonaya inay shaqeeyaan ay sidaas samayn karaan. Natiijo ahaan, waxay ka waxtar badan tahay fulinta siyaasadaha xasilinta Pareto marka loo eego kuwa laissez faire. Kuwani waa inay fuliyaan labada dawladood iyo bangiyada dhexe si ay u helaan natiijooyin maaliyadeed.
Aagga euro iyo hoos u dhaca ganacsiga
Ben Bernanke wuxuu leeyahay fikrado aad u cad marka ay timaado sida ganacsiga loo maareeyo aagga euro. Sida laga soo xigtay isaga, hoos u dhaca ganacsiga ee ka jira waddamada aagga euro -ga ayaa aakhirka baabi'in doona. Wuxuu ku adkeysanayaa in dheelitir la'aanta ka dhex jirta waddamada kala duwan ee Yurub aysan wanaagsanayn haba yaraatee, maadaama ay sababto koritaan aan dheeli tirnayn, gaar ahaan heerka maaliyadeed. Bernanke wuxuu rumeysan yahay in macaashka ganacsi ee Jarmalka uu yahay dhibaato weyn adduunka oo dhan. Dalka Jarmalka wuxuu iibsadaa wax aad uga yar inta uu iibiyo, sidaa darteed wuxuu ku dhammaadaa inuu u weecdo dalabka dalalkiisa deriska ah iyo kuwa kale ee adduunka. Sidaas ayaa wax -soo -saarka iyo shaqadaba loo yareeyaa meel ka baxsan Jarmalka.
Waxaa jira fikrado badan oo kala duwan, aragtiyo, iyo fikrado adduunyada maaliyadda. Xigashooyinka Ben Bernanke, taariikh nololeedkiisa, iyo Dhaqaalaha Cusub ee Keynesian waa qayb yar oo isaga ka mid ah. In badan oo aan ogaanno, ayaa aan noqon karnaa kuwo aad muhiim u ah iyo inta aan ka bixi karno suuqyada maaliyadeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Xigashooyinka Ben Bernanke
Sida loo abuuro Shirkad Xadidan